I-Eve Energy Strip sisixhobo esitsha esihambelana neKhayaKit | IPhone iindaba
I-Eve Energy Strip ngumtya omtsha ohambelana neKhayaKit
Kwi-iPhone eyiyo sele sihlalutye ezinye zeemveliso ezinomdla, iiplagi ezifanelekileyo ziluncedo, kodwa ngakumbi amandla emicu yamandla, Inani elilungileyo lonxibelelwano lokulawula ukusuka kwifowuni enye ehambelana neKhayaKitUmzekelo ngumzekelo Ukoogeek uhlalutye kule khonkco.
Ngoku u-Eve, inkampani ekhethekileyo kwimveliso ye-IoT ehambelana nomgaqo weKhayaKit, usungule isisombululo esitsha kwizifo zethu. I-Eve Energy Strip intle njengoko ibiza, masifumanise le strip intsha evela kwifemu ye-prestiogisa, Ngaba uzimisele ukuhlawula iindleko zalo?
IKoogeek Smart Outlet-Iiplagi ezintathu ze-Smart kwiNye
Le mveliso ka-Eva inokuthengwa kwiphepha lakhe Kwiwebhu, njengayo yonke ikhathalogu yayo, nangona uninzi lweemveliso zayo zikwakhona nakwezinye iiplatifomu zokuthenga kwi-Intanethi ezinje ngeAmazon, apho siza kufumana isaphulelo esithile (nangona eAmazon Spain imveliso ayikapapashwa ukuze ithengwe). Kodwa ndiyazi ukuba le ayikuniki mdla kakhulu, into ofuna ukuyazi lixabiso layo, kwaye njengoko ihlala isenzeka kwezinye iimveliso zale nkampani, ayibizi kakhulu. I-Eva Energy Strip iqala nge-99,95 euro ukuba siyithenga kwiwebhusayithi yayo, Kwaye sicinga ukuba ixabiso elifanayo liya kuba nalo kwiAmazon (nangona sinako ukugcina iindleko zokuhambisa).
Ineeplagi ezintathu, amaqhosha amathathu akhanyisiweyo ukuze isebenze kunye nokucinywa kweeplagi ngesandla, i-fuse ukuyikhusela kwimizi yamandla kunye nakwindlu entle kakhulu yealuminium. Eminye, isekukho umtya ohambelana neKhayaKitOko kukuthi, sinokulawula iiplagi ezivela kwisicelo seKhaya, kunye nokunxibelelana nabo ngo-Siri, umncedisi wenkampani yeCupertino. Ukuba ubukhangela umtya olungileyo kwaye mhle, olu lukhetho lwakho lokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Eve Energy Strip ngumtya omtsha ohambelana neKhayaKit
IHuawei ifuna iApple inyuse imodem yayo ye5G ngokukodwa
IPodcast 10x26: Iveki yoTshintsho